Izinja Ziqabula Izinganekwane Namaqiniso: Kungani Izinja Zikhotha Ubuso Nezinyawo Zakho? - Ezempilo
Izinja Ziqabula Izinganekwane Namaqiniso: Kungani Izinja Zikhotha Ubuso Nezinyawo Zakho?
Sonke abanikazi bezinja sesizwe kaninginingi kulabo abangenazo izinja “uyayivumela inja yakho ikukhothe? kukhulu lokho ”.
Abaningi bethu abanamahloni okukuvuma; akusikhathazi nakancane. Kepha kungani izinja zikhotha ubuso bakho? Ngabe izinja zethu ziyasikhotha njengesibonakaliso sothando, njengoba kuvame ukucatshangwa, noma ngabe kukhona okunye kuso?
Kulesi sihloko sizohlola ukuthi kungani izinja zikhotha izingxenye ezithile zomzimba wethu (isb. Ubuso, izinyawo nezandla), ukuthi kufanele sizivumele yini, nezindlela zokuzimisa uma umphathi wakho eza edilini kanye ne-slobber empeleni kungafanele kube kumenyu!
Kungani Inja Yami Ikhotha Ubuso Bami?
Izinja Zezinja - Ukuhumusha Ukukhotha Kwenja Yakho
Ingabe Kufanele Uvumele Inja Ikhothe Nhlobo?
Uma beqoqa imininingwane, kungani inja yami ikhotha izinyawo zami lapho ngiphuma eshaweni?
Kungani Inja Yami Ikhotha Izinyawo Zami?
Kungani Inja Yami Ikhotha Amanxeba Ami?
Ingabe Kufanele Uvumele Inja Ikhothe Isike Noma Isilimele?
Uyimisa Kanjani Inja Yakho Ekukhanyeni Izinyawo Zakho, Ubuso Nezandla?
Ngakho-ke Kufanele Uvumele Inja Ikhothe Wena?
Akunakwenzeka ukwazi ngokuqinisekile ukuthi kungani inja yakho izokukhotha . Asibona abafundi bezingqondo, futhi inja ayikwazi ukukhuluma. Kodwa-ke, sinemibono emihle kakhulu yokuthi lokhu kuziphatha kuthuthuke kanjani nokuthi kungani beqhubeka bekwenza.
Okokuqala ake sibuyele emuva ku-puppy hood. Uma uchitha isikhathi ubuka imidlwane, uzobona ukuthi omama bazosebenzisa isikhathi esiningi ekhotha izingane zabo.
Lokhu ukuziphatha komama ixhunyaniswe kahle nokuziphatha okuguqukayo kamuva. Ngamafuphi, leyo midlwane ekhothwa njalo lapho isencane iyakwazi ukuqina njengoba ikhula futhi ingasebenzi kahle ekucindezelekeni.
Kukholakala ukuthi isenzo sokukhotha sinciphisa ama-hormone okuxineka emzimbeni. Ukunakekelwa komama okungafanele ihlotshaniswe nezinja ezesabekayo eminyakeni yazo edlule.
Kungaphikiswa ukuthi izinja zikhotha abanikazi bazo ukunciphisa amazinga oxinzelelo. Emhlabeni ongabonakali ubuthongo, ingabe ama-poococ ethu empeleni azama ukusisiza sizizwe singcono?
Siyazi ukuthi phambi kwezinja zabo, Izinga lomnikazi le-oxytocin liyakhula . I-Oxytocin yi-hormone ebandakanyeka ekuhlanganisweni komphakathi nasekunamathisweni
Ukuphendula lokhu, bheka ukuthi inja yakho ikukhotha ngaphezulu uma uzizwa ucindezelekile.
Esinye isizathu esenza omama bakhothe izingane zabo wukuzilungisa nokuzigcina zihlanzekile. Imidlwane ifunda ukuzilungisa kuMama wayo.
Ngakho-ke, ingabe ama-poococ ethu asigcina sihlanzekile?
Imvamisa lapho izinja zikhotha izinyawo zethu, sivame ukucabanga ukuthi kungenxa yokuthi izinyawo zethu mhlawumbe ziyingxenye yomzimba wethu enobuhlakani obukhulu. Ngokwesayensi, asikho kude nephutha.
Kukhona okuningi izithukuthuku zokujuluka ezinyaweni zethu , nge-intshi, kunanoma iyiphi enye indawo emzimbeni wethu!
Thanda lapho izinja zikhefuzela , ngokuyinhloko siyajuluka ukuze sikhiphe ukushisa emizimbeni yethu. Lokhu kuvamise ukwenzeka ngenxa yamazinga okushisa ashisayo noma ukuzivocavoca kepha futhi kungaba njengempendulo yengcindezi - lapho sicindezelekile, ukushaya kwenhliziyo yethu kuyanda, kudala ukushisa okwengeziwe emzimbeni.
Kodwa-ke, sifunde nokuthi ukujuluka kufeza injongo yokugcina umgoqo wesikhumba futhi kungaba njalo okukhombisa ezinye izimo zezempilo njenge-cystic fibrosis, izingqinamba ze-thyroid, isifo sikashukela nezicubu.
Sijwayele ukucabanga ukuthi izithukuthuku ziyingxube yamanzi anosawoti, kepha umjuluko uyakhiwa ikakhulukazi amanzi , ene-ammonia, i-sodium, i-potassium, i-magnesium, i-chloride, i-nicotinic acid, i-creatinine, i-uric acid, i-ascorbic acid, i-thiamine ne-riboflavin.
Izinja azinabo ubumbano kasawoti, kodwa zenzela amanzi.
Uhlelo lwabo olfactory (inzwa yokuhogela) luyamangalisa. Lokhu bakusebenzisa ukwenza umqondo womhlaba wabo, inja, ngokwesilinganiso, inayo Ama-receptors ayizigidi ezingama-220 kanti abantu banezigidi ezi-5 kuphela.
Bayakwazi ukuhogela yonke i-molecule etholakala esithukuthuku sethu. Ngakho-ke empeleni, lapho bekhotha izinyawo zethu baqoqa imininingwane emangazayo ngathi njengezinja zisikhotha njenge ukuziphatha kokuhlola .
Lokhu kuvame ukuthi kungani izinja sizozwa ukuthi siyagula ngaphambi kokuthi sazi ukuthi siyikho.
Njengoba sishilo ekuqaleni, izinja zinokusondelana kwamanzi. Ngakho-ke empeleni, lapho bekhotha imilenze noma izinyawo zakho lapho usanda kuphuma eshaweni - kungenzeka ukuthi kungenxa yokuthi unamanzi esikhunjeni sakho.
Ngakho-ke sesisungule ukuthi izinja zikhotha abantu ngezizathu ezahlukahlukene:
Bangase bazame ukusithambisa - ngokunciphisa izingcindezi zethu
Bangase baqoqe imininingwane ngathi
Kungenzeka ukuthi basikhotha nje ngoba sinamanzi esikhunjeni sethu
Esinye isizathu esingathandeki kangako, ukuthi izinja zizokukhotha ubuso bakho ngoba nje unezinsalela noma iphunga lokudla lapho
Njengoba sishilo, uhlelo lokuhogela inja lubenza bazwele ebangeni elithile lamakha. Noma ngabe usule umlomo wakho ngemuva kokudla, ngeso lenyama akukho okusele, enjeni, basazohogela ukuthi inyama kaPhilly cheese oyidle kwasemini.
Izinhlobo ezithile zezinja unamamukeli amaningi wephunga kunabanye
# Okwamukela Amaphunga
Dachshund 125 Million
Fox Terrier 147 Million
I-Beagle Izigidi ezingama-225
Inja Yabelusi BaseJalimane Izigidi ezingama-225
Igazi Izigidi ezingama-300
Ngakho-ke ungaqaphela ukuthi uma inja yakho ingenye yalezi zinhlobo ezingenhla, zingakhotha ubuso bakho kakhulu ngoba zizwela kakhulu kukho konke ukudla obucabanga ukuthi ukusule.
Ngakho-ke izinja zisikhotha ngoba zidonswa yizicucu zokudla namanzi - hhayi ngothando olunjalo. Siphinde sibe nenye incazelo ephonsa wonke umqondo wothando ngefasitela.
Inja iyasikhotha ngoba siyifundisile.
Ngakho-ke abaningi awukhumbuli ngenkuthalo ufundisa inja yakho ukukukhotha, kodwa cabanga ngayo; uphendula kanjani uma inja yakho ikukhotha? Iningi lethu liyahleka, limomotheka, libaphathise noma okungenani lihlanganyele nabo ezingeni elithile. Siyazi ukuthi leyo nja ifunda ngayo isimo sokusebenza .
Uma isenzo senza impendulo enhle noma ukuqiniswa kungenzeka kakhulu ukuthi siphindwe .
Ngakho-ke, lapho i-pooch yethu isikhotha futhi sihleka, simomotheka noma sinikeze impendulo ejabulisayo; bakuthatha njengempendulo enhle (okuyiyona) baphinde baziphathe. Izinja zethu zingasikhotha ngoba zicabanga ukuthi yilokho esifuna zikwenze.
Lokhu kuchaza nokuthi kungani izinja zivame ukuqabula abanye abantu hhayi abanye. Uma othile ephendula ngendlela enhle, inja inamathuba amaningi okuphinda lokho kuziphatha. Uma beqabulana nothile bese bephendula ngendlela engeyinhle - akunakwenzeka ukuthi inja izophinda futhi.
Noma yibaphi abanikazi bezinja bazokutshela, uma uzidlile noma uzisika, inja yakho izoqala ukukhotha isilonda. Iningi labantu lizodilizwa, kepha empeleni kunezifundo ezithile eziphakamisa ukuthi lokhu kuyasiza ekwelapheni.
Umcwaningi e-University of Amsterdam uthole ukuthi zikhona izici zokukhula nama-histatins ematheni abamba iqhaza ekuvaleni isilonda. Ama-histatins angama-antimicrobial and antifungal, ngakho-ke anciphisa amathuba okutheleleka.
Ungasho-ke ukuthi uma izinja zikhotha amanxeba empeleni ziyindlela yokwelapha isinqandakuvunda . Basusa nanoma imuphi udoti ezinxebeni ngolimi lwabo, babuye banciphise namathuba okutheleleka.
Ngamagama wokuziphendukela kwemvelo, lokhu kunengqondo ngokuphelele. Yilokho kuphela izinja ebezizoba nazo - bezingeke zikwazi ukuthola ikhithi yosizo lokuqala endle! Le ndlela elula ibingabagcina bephila.
Ngaphandle kwalo mqondo wokufudumala wokuthi izinja empeleni zingasiza ekwelapheni amanxeba, kufanele kukhunjulwe ukuthi a inqwaba yamagciwane sitholakale nasematheni athembekile kaFido.
Amanye ala mabhaktheriya yi-zoonotic, okusho ukuthi angadlulisa izifo zisuka esilwaneni ziye komunye umuntu. Amagciwane atholakala ematheni e-canine axhunyaniswe ne-septicemia, okungafanele uma uvumela i-pooch yakho ukuthi ikukhothe isilonda sakho.
Iningi labanikazi bezinja alizimisele ukumisa inja yabo ekuzikhotheni - kodwa kuyadingeka ukuthi kuvezwe ukuthi kunezinhlobo eziningana zamagciwane atholakala emilonyeni yezinja.
Ucwaningo olwenziwe lwathola amagciwane alandelayo emilonyeni yenja:
I-Proteobacteria - lokhu kufaka phakathi i-salmonella eyaziwa kahle futhi Amagciwane e-helicobacter . Iningi labantu liyazazi izimpawu ezijwayelekile zobuthi beSalmonella: isifo sohudo, umkhuhlane, amajaqamba esiswini nokuhlanza. Abanye abantu bangaba namabhaktheriya e-helicopbacter emgudwini wokugaya futhi bangaboni zimpawu zeminyaka ethile.
I-Actinobacteria - lokhu kufaka ama-Streptomyces asetshenziselwa ukukhiqiza ama-antibiotic nama-antifungal.
Ama-bacteroidetes - lawa magciwane atholakala kwizifo eziningi ze-anaerobic futhi aziwa njengamelana nama-antibiotic.
AmaFirmicute - lokhu kufaka phakathi amakilasi angaphansi kweClostridia neBacilli. Ama-bacilli afaka inani lama-bacteria we-pathogenic.
I-Fusobacteria - lama bacterias aziwa ngokudala isifo se-periodontal, iLemierre's Syndrome nezilonda zesikhumba.
Ngamafuphi, ngokuvumela inja yakho ikukhothe, ingadlulisa amagciwane angakugulisa.
Njengoba sishilo ekuqaleni, izinja zifunda ngesimo sokusebenza; okusizayo lapho ubaqeqesha . Lokhu singakusebenzisa ngokunenzuzo yethu lapho sizama ukufundisa inja yethu ukuyeka ukuziphatha okungafuneki.
Uma inja yakho iqala ukukhotha izinyawo zakho, ungazinaki. Njengoba siphakamisile ngenhla, impendulo ejabulisayo ibingafundisa i-pooch yethu ngokungazi ukuthi ikwenze.
Uma ukunganaki kungasebenzi zama ngezansi:
Susa ithuba - gcina izinyawo zakho zisendleleni
Uma ephikelela - mphazamise ngokujikijela okuphatha phansi kude nalapho kunezinyawo zakho noma umhlafune.
Okubalulekile ukuthi afunde ukuthi ukukhotha akayitholi impendulo - mancane-ke amathuba okuthi akwenze.
Khumbula ukugwema ukusetshenziswa kwesijeziso - siyazi ukuthi izindlela zokuphindisela zingenza isimilo esinenkinga ezinjeni okuvela ngenxa yokwesaba nokukhathazeka.
Akunakuphikwa ukuthi kunengozi yokuthi inja yakho ikudlulisele amagciwane we-pathogenic kuwe uma uyivumela ukuthi ikuqabule (ikukhothe).
Kodwa-ke, futhi sithole ukuthi kunezinto ezizuzisayo ematheni e-canine angenza njenge-antimicrobial and antifungal.
Amathe aqukethe nezici zokukhula ezingasekela ukuvalwa kwamanxeba .
Kusukela ezinsukwini zabo zokuqala, imidlwane ifunde ukuthi umama wabo ubakhotha ubenza bathule futhi banciphise amazinga ama-hormone okucindezeleka. Singasho ukuthi lapho izinja zisikhotha, zizama futhi ukunciphisa izingcindezi zethu.
Ngicabanga ukuthi ungasho ukuthi amajaji aphumile ekutheni ukwanga kwenja empeleni kukuhle noma kubi yini kuwe. Kodwa-ke, uma uthatha isinqumo sokuthi awusafuni ukuthi inja yakho ikukhothe sinezikhombisi ezimbalwa ezisebenzisekayo ngaphezulu.
Ngakho-ke mhlawumbe izinja azisiqabuli njengoba besicabanga.
Yize singaphikisana ngokuthi izinja zisikhotha ukunciphisa izingcindezi zethu, njengoba kwenza oMama bazo, kungenzeka ukuthi sifunde singahlosile ukuthi sifundise izingcosana zethu ukuthi siyazithanda lapho zisanga, ngakho-ke ziyaqhubeka nokwenza njalo.
Izinja zizokukhotha ubuso, ikakhulu ngoba unezinsalela zokudla ezisele - ezingabonakali ngeso lenyama, kodwa ikhala labo elimangalisayo lizozikhipha.
Ungase uzizwe lolo limi lobudlabha njengoba usuphumile eshaweni - ikakhulu ngenxa yokuthi unamanzi esikhunjeni nasezinjeni njengamanzi.
Azikho izinja eziphikayo ezizokukhotha ukuze uqoqe imininingwane , yingakho-ke bejwayele ukukhotha izingxenye ezijuluke kakhulu zomzimba wakho; izandla nezinyawo. Imininingwane efana nale evame ukubazisa ngempilo yethu egulayo ngisho nangaphambi kokuba sazi lutho ngayo.
Ucwaningo lukhombisile ukuthi amathe angasiza ekupholiseni isilonda futhi angasebenza njengendlela yokuvimbela ukubola.
Kodwa-ke kusobala futhi ukuthi kunezinhlobo eziningi zamagciwane egciwane ematheni angadala ukutheleleka kubantu. Ngakho-ke uzoqhubeka nokuvumela i-pooch yakho ukuthi ikuqabule?
Ukuzala Izinja 101: Yini iWolfdog yaseCzechoslovakian?
Ngabe iPeterdale Terrier isilwane esimnandi noma esinenkinga ukuba naso?
Imininingwane Yezinja ZaseBasenji
I-Teacup Chihuahua: Imidlwane, Isikhathi Sokuphila, Intengo, Izithombe Nabazalisayo
Nobungane, ukulangazelela ukujabulisa: Konke mayelana nenja yaseGolden Mountain
Umalusi WesiNgisi: Umhlahlandlela Ophelele Wokuzala Inja
I-Pitbull Boxer Mix: Iqiniso Ngalesi Pooch Enamandla
Amagama Amalebhu Ephuzi: Amagama Ahamba Phambili Angu-180+ SIWATHANDA Amalebhu
Lokho Esikwaziyo Nge-Hip Dysplasia ezinjeni
ILabradoodle vs Goldendoodle - Yikuphi Ukuzala Okuyiyona Inja Yomndeni Ehamba phambili?
Intengo yeGold Retriever: Yini ozoyikhokha ngempela
inja yangemuva yomlenze imisipha yomzimba
ushokoledi amagama lab abesifazane
siberian husky x umalusi waseJalimane
usayizi wokuxuba we-labrador border collie
Intengo yokuxuba ye-yorkie shih tzu
bichon frize king charles spaniel mix